एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताउनुभयो ।
“केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको संख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
“यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,” उहाँले पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो ।
ई-चुरोट निकै खतरनाक : १८ वर्षीय युवकको फोक्सो ७० वर्षीय वृद्धाको जस्तो.
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित
चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको अबैध शुल्कको रसिद दिने !
चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको अबैध शुल्कको रसिद दिने बताएको छ । विगत १६ दिनदेखि अबैध शुल्क तत्काल फिर्ता हुनु पर्ने मागसहित विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । आज (बुधवार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अस्पताल प्रशासनले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको रसिद दिने बताएको हो ।
विद्यार्थीहरुले मंगलबार मात्रै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएपछि कलेज प्रशासनले केही लचकता अपनाउने देखिएको हो । आँफूमाथि भएको दमनको विषयमा विद्यार्थीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेर विद्यार्थीमाथि लाठी चार्ज गर्दै आएको थियो ।
‘एमबीबीएसको शुल्क विवादमै छ’, देवकोटाले भने, ‘चितवन मेडिकल कलेजलाई मात्र केन्द्रित गरेर आन्दोलन गरिएको छ ।’ उनले आन्दोलन राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने र राजनैतिक रुपमा स्थापित हुन भ¥याङ बनाउने र नितान्त दुःख दिने हिसाबले गरिएको बताए । विप्लवका छोरा प्रकाशलाई लक्षित गर्दे उनले भने, ‘देशभर थुप्रै मेडिकल कलेज छन् चितवन मेडिकल केलजमा मात्र आन्दोलन किन ?’
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको अबैध शुल्कको रसिद दिने !
काठमाडौं : श्रम सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा भएको छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सुरुमा कामदारले तिर्ने र मलेसियामा रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पन्ध्र महिनादेखि भएको गतिरोध टुंग्याउँदै दुवै देशले गत बिहीबार यसमा सहमति गरेका छन् । त्यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘नेपाल र मलेयिाबीच २०१८ अक्टोबर २९ मा भएको श्रम सम्झौताबमोजिम बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् ।’
विज्ञप्तिमा दूतावासले स्वास्थ्य परीक्षण खर्चको ढाँचा पनि देखाएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ गरी ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ हुनेछ । त्यो रकम सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्ने र रोजगारदाताले फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष जेठदेखि रोकिएको हो । २०७५ कात्तिक १२ गते दुईबीच श्रम सम्झौता भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा कुरा नमिल्दा कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन् । मलेसिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो ।
मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि मापदण्ड पररीक्षण गरे ३७ मेडिकल सेन्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले पुनः अनुगमन गरी १ सय २२ वटाको सूची तयार गरेको छ । तिनमा पुराना ३६ वटा परेका छन् । बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएका भएकाले हाललाई तिनै ३६ संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । बाँकी ८६ को नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई थप्न मलेसिया तयार भएको छ ।
बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसियाका सरोकारवाला निकायले अनलाइनबाट तत्काल रिपोर्ट पाउँछन् । त्यसको दुईदेखि तीन दिनमा कलिङ भिसा आउँछ । पहिला त्यसलाई सरदर ३ महिना लाग्थ्यो । कागजपत्र कुरियरबाट ल्याउने÷लाने गरिन्थ्यो । त्यो खर्च कामदारलाई तिराइन्थ्यो । श्रम सम्झौतासँगै कामदारको अभिभारामा कुनै खर्च पर्दैन । श्रम मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कडा अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
बीआरआई परियोजना प्रस्ताव गर्न सुझाव
काठमाडौं : चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई) मा नेपालले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। बीआरआई अन्तर्गत चीनले अनुदान नभई ऋण सहयोग गर्ने भएकाले नेपालले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताका परियोजना प्रस्ताव गरी फाइदा लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
फ्रेन्डसीप फोरम अफ नेप्लिज जर्नलिस्टले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको बीआरआईमा नेपालको अवधारणा विषयक कार्यक्रममा लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरन्यलाल श्रेष्ठले बीआरईबाट नेपाले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए। उनले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘यसले नेपाललाई विश्व बजारमा जोड्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई ‘ल्यान्ड लिंक’ मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्न उपयोगी हुनेछ।’
भारतमा पनि ठूलो लगानी चीनबाट नै आएकाले नेपालले चीनबाट लगानी ल्याउन पछिपर्न नहुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार बीआरआई चीनको दक्षिण एसियामा बजार विस्तार गर्ने योजना पनि हो। बीआरआई सफल भए एसियाली राजमार्ग र रेलमार्गको नेपाल पारवहन विन्दु बन्न सक्छ। उनले यसमार्फत सस्तोमा ऋण लिएर नेपालले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा डेनमार्गका लागि पूर्वनेपाली राजदूत विजयकान्त कर्णले बीआरआई निकै महत्वाकांक्षी र चीनको रणनीतिअनुसार सुरु गरिएको कार्यक्रम भएको जानकारी दिए। चीनले आफू कसरी विश्वको शक्तिकेन्द्र बन्न सकिन्छ भन्नका लागि यस्तो परियोजना अघिसारिरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले बीआरआईका विषयमा संसद् र आमनागरिकसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको गुनासो गरे।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले बीआरआईलाई आफ्ना सामान विश्वबजारमा थप प्रभावकारी रूपले विस्तार गर्ने चीनको साधन भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न चार हजार परियोजना छन्। त्यसैले नेपालले आफूलाई उपयुक्त हुने परियोजना छनोट गरी त्यसमा लगानी गर्न चीनलाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’ यो आर्थिक र विकासका लागि भए पनि यो एक पहल मात्र हो।
यसले सबै काम र लगानी गर्ने होइन। नेपाल–चीन साँस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद्का अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र शाहले चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलिन हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले नेपाललाई के आवश्यक छ त्यसअनुसार परियोजना तयार गर्न सरकारलाई सुझाए। नेकपाका नेता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले इन्डो एसिया प्यासिफिकलाई नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए। उनले बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताए।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on मलेसियाले भन्यो-मेडिकल खर्च रोजगारदाताले तिर्छन्
प्रचण्ड मेडिसिटी अस्पतालमा
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दाँतको उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन्।
प्रचण्ड दाँतको उपचारका लागि ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेका हुन्। बारम्बार दाँत दुख्न थालेपछि बुधबार दिउँसो प्रचण्ड अस्पतालमा पुगेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रचण्डको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले दाँत निकाल्न सुझाव दिएका छन्।
अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्यो, मोरङमा सबैभन्दा बढी
विराटनगर : प्रदेश १ मा एक वर्षको अवधिमा एक सय ६४ बालबालिका विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको पाइएको छ । प्रदेशभरी मोरङमा सबैभन्दा बढी अपराधिक घटनामा बालबालिकाको संलग्नता देखिएको छ । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठकाअनुसार कमजोर पारिवारिक आर्थिक अवस्था, पारिवारिक बेवास्था, शिक्षादीक्षा, अभिभावकको संरक्षण तथा मायाको अभावमा बालबालिका अपराधिक गतिविधिमा लाग्ने गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको बताए ।
कानुनी ज्ञानका अभावका कारण सही र गलत छुट्याउन नसक्दा अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता धेरै हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले धेरैजसो अपराधिक घटनामा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको डीएसपी श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी शेखर कोइरालाले बालबालिकाको संलग्नतामा अपराध हुने जिल्लामा झापा दोस्रो र सुनसरी तेस्रो स्थानमा रहेको बताए ।
१८ वर्ष मुनीकालाई कानुनले बालबालिका मान्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश भरी १ सय ६४ जनामध्ये मोरङमा ६४, झापामा झापामा ६१ र सुनसरीमा २७ बालक अपराधमा संलग्न रहेको तथ्याँकले पुष्टि गर्छ । मोरङमा दुई र सुनसरीमा एक बालिका अपराधमा संलग्न छन् ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये उदयपुरमा पाँच बालक, ओखलढुंगामामा दुई, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र खोटाङमा एक÷एक जना १८ वर्ष मुनीका बालक अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको रेकर्डमा छ ।
धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा भने बालबालिकाको संलग्नतामा कुनै पनि घटना भएका छैनन् । बालबालिकाको संलग्नतामा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, जबरजस्ती करणी, करणी उद्योग, अभद्र व्यवहार, लागूऔषध, बालविवाह, चन्दा संकलन, अपहरण समेतका अपराधिक घटना हुने गरेको एसएसपी कोइरालाले बताए ।
अपराधमध्ये कर्तव्य ज्यानमा १३, ज्यान मार्ने उद्योगमा आठ, चोरीमा १०, जबरजस्ती करणीमा २९, करणी उद्योगमा आठ, अभद्र व्यवहारमा ३४, लागुऔषधमा १०, बालविवाहमा चार, बहुविवाहमा तीन, चन्दा संकलनमा एक र अपहरणमा ४१ जना बालकको संलग्नता छ । लागुऔषधमा एक र बालविवाहमा दुई बालिका संलग्न छन् ।
कोइरालाले अभाव र समस्यामा गुज्रिएका बालबालिकाको पहिचान गर्दै अपराधिक गिरोहले कानुन विपरितका काममा प्रयोग गर्ने गरेको बताए । ‘प्रहरीले पनि शंका नगर्ने भएकाले बालबालिकाको प्रयोग अपराधमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी, अशिक्षा र अभावले बालबालिकालाई अपराधमा डोहोर्‍याएको पाइयो ।’
कोइरालाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अभिभावकले खानलाउन, शिक्षादीक्ष दिन नसक्दा तथा बेवास्था गर्दा हरेक इच्छा र आकांक्षा पूरा नभएका कारण विचलित भएर बालबालिका अपराधउन्मुख हुने गरेको बताए ।
प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआइजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली सबै कुराले अपरिपक्व हुने हुँदा बालबालिका आफै भन्दा पनि अपराधमा अरुले प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘आफूले के गर्दा कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा अरुले उक्साएर प्रयोग गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय बालबालिका संलग्न रहेका घटना आकस्मिक रुपमा पनि भएको पाइएको छ ।’
पढ्न नसक्दा, परिवारबाट तिरस्कृत हुँदा तथा अभिभावकले इच्छा र चाहना पूरा गर्न नसक्दा पनि बालबालिकाले अपराधको बाटो रोज्ने गरेको जानकारी ज्ञवालीले दिए । अपराध गर्ने बालबालिकालाई विराटनगरस्थित बालसुधार गृहमा राखेर अनुसन्धान र कारवाही अघि बढाउने गरिन्छ । कारागार र प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइँदैन ।
डीआईजी ज्ञवालीले अपराधमा बालबालिका संलग्नताको सवालमा पारिवारिक वातावरण, साथी संगत र उनीहरुमाथि गरिने व्यवहारले पनि असर गर्ने बताउँछन् ।अपराधमा बालबालिकाको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा झार्न प्रहरीले जनचेतनामुलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।
बालबालिका अपराधमा संलग्न हुनबाट जोगाउन परिवारले होसियारी अपनाउनु पर्ने र विभिन्न निकाय सक्रिय भएर लाग्नु पर्नेमा प्रहरीको जोड छ । अभिभावकमा सचेतना, बालबालिकालाई उचित वातावरण, सही मार्ग दर्शन, पारिवारिक सक्षमता, प्रहरी सक्रियता, अपराधका विरुद्ध शैक्षिक संस्था केन्द्रीत कार्यक्रम र जनचेतनाले अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता रोक्न सकिने डीआईजी ज्ञवालीले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका स्रोत व्यक्ति सुमन अधिकारीले अनेक मनौविज्ञानी असर न्यूनीकरण गर्दै पारिवारिक वातावरण सृजना गर्न सके अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता रोक्न सकिने बताए । यसका लागि मन्त्रालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर प्रदेशका एक सय ३७ वटै स्थानीय तहमा आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
Posted byadmin September 18, 2019 September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on प्रचण्ड मेडिसिटी अस्पतालमा
नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव
काठमाडौं : एक सरकारी कार्यदलले नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको छ। पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्मा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले निगममा तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले बुधबार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बुझाएको प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याएर निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएको छ। समितिले निगमको व्यवस्थापनबारे यसअघि तयार पारिएका ६ वटा प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी नयाँ प्रतिवेदन दिएको हो।
प्रतिवेदनले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लान र सर्वसाधारणदेखि विभिन्न संस्था/निकायलाई पनि शेयर जारी गर्न सुझाव दिएको छ। रणनीतिक साझेदारीमा नजानु तथा राजनीतिक नियुक्ति निगमको समस्याको मूल जड भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको समिति संयोजक घिमिरेले बताए।
घिमिरेले निगमलाई सुधार गर्न निगमको लेखा प्रणाली सुधार, वित्तीय पुर्नसंरचना सुधार, रणनीतिक साझेदार तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने, गन्तव्य विस्तार गर्न ए ३२० नामका न्यरोबडि किन्ने सहितका १३ वटा तत्कालीन सुझाव दिएको छ।
अब नयाँ जहाज किन्दा सिधै उत्पादकसँग मात्र किन्न, खरिद कर्यालयको प्रतिनिधि राख्‍नेसहितका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। निगमले प्रविधि प्रयोग, मोबाइल एप, अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रणाली चलाउन पनि सुझाव दिएको छ। पब्लिक कम्पनी बनाउने सहितका दीर्घकालीन सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले तोकिएको समयमै प्रतिवेदन तयार पारेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए। गत साउन २२ गते गठित समितिले काम सुरु गरेको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा निगमलाई नाफामा लान प्रतिवेदनले सुझाएका उपायले सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा लान दिएको सुझाव हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्नेछौँ’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘नेपाल सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। अब आम नेपाली र बुद्धिजीवीको पनि सुझाव आयोस्। हामी त्यसलाई पनि लिएर जान्छौँ।’ कार्यतालिका बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव
स्वास्थ्य मन्त्री यादव किन जाँदैछन् अमेरिका ?
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवसहितको टोली बुधबार अमेरिका प्रस्थान गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री यादवसहितको टोली अमेरिका जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेप्टेम्बर २२ र २३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुन लागेको ‘युएन जनरल एसेम्ब्ली हाई लेभल मिटिङ अन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ नामक बैठकमा मन्त्रीसहितको टोलीले सहभागिता जनाउने छ। यादव नेतृत्वको टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी र यादवका निजी सचिव अमरेन्द्र यादव छन्।
‘बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवद्धता वृद्धि गर्न तथा स्वास्थ्यमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रीसहितको टोली यसका अलावा अन्य विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। टोलीले ‘अपरच्युनिटिज् एन्ड च्यालेन्जेज् टुवार्ड्स यूएचसी इन लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज’ विषयक अतिरिक्त कार्यक्रमको नेतृत्वसमेत गर्नेछ।
यसका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यादवसहितको टोली राति साढे ९ बजे अमेरिकाका लागि प्रस्थान गर्नेछ।
सन्दर्भ संविधान दिवस : सुदूरपश्चिममा असोज २ गते ओपीडी सेवा निःशुल्क
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस उत्साहका साथ मनाउने तयारी गरेको छ । दिवसको तयारीका बारेमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारले असोज २, ३ र ४ गते घर-घरमा दिपावली गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
असोज २ गते सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा, ब्यानर राख्ने, सरसफाइ गर्ने सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव अर्जन पोखरेलले बताए ।
यसैगरी, संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते बिहान धनगढीमा प्रभातफेरि गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई सलामी अर्पण गर्ने, मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै असोज चार गते वृक्षारोपण गर्ने जनाइएको छ । संविधान जारी भएको खुशीयालीमा असोज २ गते प्रदेशका सबै अस्पतालमा ओपीडी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र २, ३ र ४ गते सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीयको घर-घरमा दिपावली गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको हो ।
दिवस मनाउनका लागि प्रदेश सरकारले समिति तथा उप-समिति पनि गठ गरेको छ । दिवसमा सर्वसाधारणका सहभागिता पनि उत्सावपुर्वक हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on स्वास्थ्य मन्त्री यादव किन जाँदैछन् अमेरिका ?
साढे २२ अंकले बढ्यो सेयर बजार
काठमाडौं : पुँजी बजार सकारात्म दिशातर्फ अघि बढेको छ। निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको बजारमा सरकार तथा नियामक निकायले सुधारका कामअघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै बजार बढ्न सुरु गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न आव्हान गरेका थिए। सेयर किन्ने अहिले नै सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको खतिवडाले बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको वक्तव्यले सेयरमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाल स्टक एक्सेन्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले बढेको छ। नेप्से बुधबार २२.६८ अंकले बढेको हो। नेप्सेको सेन्सेटिभ सूचांक पनि ४.१३ अंकले बढेको छ। आज एक सय ७१ कम्पनीको १६ लाख ४५ हजार आठ सय ७७ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ । ४७ करोड ६८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
बैंक १८.७, होटल ६९.४८, विकास बैंक १०.२६, जल विद्युत ११.४९, वित्त २.२३, निर्जीवन बिमा १४३.०८, उत्पादन मुलक ७३.८४, अन्य १२.५९, माइक्रोफाइनान्स ३२.५१, जीवन बिमा १७१.९ र म्युचल फन्ड ०.०१ अंकले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट्स सेयर कारोबार भएको छ। यसको ६ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको हो।
सिन्धु विकास बैंकको सेयर १० प्रतिशतले बढेको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर ४.५४ प्रतिशतले घटेको छ।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on साढे २२ अंकले बढ्यो सेयर बजार
ब्लड क्यान्सरले छोरा गुमाएका बाआमाको बिन्ती- अब छोरीहरू बचाइदिनुस्
सन्धिखर्क : आँगन नभएको सानो घरको बलेनीमा मुख फाटेको ताउलोमा आधा पानी देखिन्छ। दुई कोठामध्ये एक कोठामा पुराना कपडाबाट बनाइएको एउटा डसना, पुरानो कम्बल र पुरानो कपडाको खोल भएको सिरक। दुई बालिका यहीँ खेलिरहेका छन्।
यी दुई नानीहरूलाई क्यान्सर र मुटु रोग लागेको छ। वर्ष दिनअघि ब्लड क्यान्सरबाट भाइ गुमाएका उनीहरू आफैं त्यस्तै समस्याबाट ग्रसित भएका छन्। तर आर्थिक अभावका कारण उनीहरूको उपचार हुन सकेको छैन।
अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाँउपालिका ४ केरुंगाको कोटमुनीका रामबहादुर सुनारको परिवारको दुःख लामो छ।
उमेरले ४१ वर्ष लागेका रामबहादुरले एक वर्षअघि ब्लड क्यान्सर लागेका ५ वर्षका छोरा विष्णुलाई आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकेर गुमाउनु पर्‍यो। छोरा गुमेको एक वर्ष नहुँदै दुई छोरी मध्ये एकलाई ब्लड क्यानसर र अर्कीलाई मुटु रोग लागेको छ।
गाउँपालिकाले सहयोगको आग्रह गर्दै बनाइदिएको पत्र देखाउँदै सृष्टि र सुश्मा। फोटोः प्रेमनारायण आचार्य/अन्नपूर्ण
‘जो होचो, उसैका मुखमा घोचो’ भने जस्तै भएको छ यो परिवारमा। ९ वर्षकी सुश्मा रगतको क्यान्सरबाट पीडित छन्। ७ वर्षकी सृष्टि मुटु रोगी छन्। आर्थिक अभावले अस्पताल लैजान नसकेर घरमै राख्नु पर्ने बाध्यता सुनाए रामबहादुरले। मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने उनले पैसा अभावले छोरीहरूलाई उपचार गर्न लैजान नसकेको बताए।
‘एउटीलाई ब्लड क्यान्सर, अर्कीलाई मुटु रोग’, अन्नपूर्णसँग उनी भक्कानिए, ‘एउटीलाई गंगालाल लैजान भनेको छ, अर्कीलाई भरतपुर हस्पिटल। अवस्था कमजोर भएकाले मैले उपचार गर्न लैजान सकेको छैन।’
सुश्मालाई भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र सृष्टिलाई काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल लैजान डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। उपचार त के अस्पताल लैजान भाडा पनि नभएको सुनाउँदा उनी झन् सुकसुकाउँछन्।
‘छोरा डिल्ली (भारतको दिल्ली) मा बितेको हो। अहिले छोरीहरूलाई त्यस्तै भयो’, भक्कानिँदै उनी भन्छन्, ‘मलाई सहयोग गर्दिनुस्। नत्र नानीहरूले उपचार नपाउने भए।’ सम्पत्तिको नाममा गाउँको एक रोपनी भिरालो जमिनमा बनेको यो घरमात्र भएका उनी छोरीहरूलाई पनि छोराजस्तै अकालमा गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने भयमा छन्।
बहिनी काखमा च्यापेकी सुश्मा। फोटोः अन्नपूर्ण
आमा कमला गहभरी आसु पारेर आफ्ना दुःख सुनाउँछिन्। ‘पैसा नहुँदा इलाज गर्न पाइएन। घरमै नानीहरू हेर्दै रुन्छौँ’, उनी भन्छिन्, ‘आय स्रोत नहुँदा बाबु गयो। अब यिनीहरूको के हुने हो ?’
‘देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैले सहयोग गर्नुस्। बाबु त रोगैले गयो, छोरीहरू बचाउन चाहन्छौँ’, उनले अन्नपूर्णसँग बिन्ति बिसाइन्।
सुश्मा र सृष्टि दुबै स्थानीय चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ र २ मा पढ्छन। सहयोगको अपेक्षामा रहेका रामबहादुर र कमलालाई छत्रदेव गाँउपालिकाले एउटा पत्र बनाइदिएको छ- सहयोग गर्नुस् भनेर। तर सहयोग खोज्न कहाँ जाने भन्ने पनि उनीहरूलाई मेसो छैन।
अशिक्षा र गरिबीको मारमा रहेको यो ठाउँमा अरुजस्तै रामबहादुर र कमलालाई परिवार नियोजनका साधन र गर्भान्तरका बारेमा जानकारी छैन। काखमा ७ महिनाकी छोरी छन्। र, कमला फेरि गर्भवती छन्।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on ब्लड क्यान्सरले छोरा गुमाएका बाआमाको बिन्ती- अब छोरीहरू बचाइदिनुस्
जेष्ठ नागरिकको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। पर्यटनमन्त्री याेगेश राईको एक वर्ष कार्ययोजनामा उल्लेख भएको ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकलाई छुट दिने घोषणाको कार्यान्वयन निगमबाट सुरु भएको हो।
निगमले आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको बुधबार विज्ञप्ती निकालेर जानकारी गराएको हो। निगमका अनुसार भाडादरमा छुट दिने यस्तो निर्णय आजैबाट (असोज १ गतेदेखि) नै लागू भएको छ।
भाडा दरमा छुट पाउन जेष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पुगेको प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्ने छ। ५० प्रतिशतको यस्तो भाडादरमा छुटको व्यवस्था निगमको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने निगमका सह-प्रवक्ता सुलेख मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत कार्यान्व्यन गर्न क्यान्सर पीडितका विरामीलाई पनि निःशुल्क र छुटका टिकट उपलब्ध गराउँदै निगमले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on जेष्ठ नागरिकको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट
राजाले आफ्ना विरुद्ध बोल्नेलाई जेल हाले जस्तै गणतन्त्र विरुद्ध बोल्नेलाई पनि जेल हाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी
असोज १, काठमाडौं । कठोर राजतन्त्र र पञ्यायतको विरोध गर्दा त्यो बेलाको शासन सत्ताले विरोध गर्नेलाइ जेल हाल्थ्यो । त्यस्तै अब गणतन्त्रको पनि विरोध गर्नेलाइ सरकारले नियान्त्रणमा लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुल्ला कार्यक्रमबाटै चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संघीय संसदको नयाँ भवनको शिलान्यास कार्य्रकममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आन्दोलन सकिएकाले गणतन्त्रको विरोधमा बोल्न नहुने बताए । ‘केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोसिस गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, एक्सनमा जान्छ ।’
‘हिंसामा गएर के प्राप्ति गर्ने हो रु संघीयता, आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै प्राप्त भइसकेका छन्’, ओलीले भने, ‘हिंसा लुटपाट र जनतालाई दुस्ख दिने काम सह्‍य हुँदैन।’ उनले अब हत्या हिंसा छाडेर देश विकासमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
‘कतिपयलाई चमडीको मायाले प्रतिबन्ध लगाउँदा किन यो गरेको भन्छन्, तर त्यो मानिँदैन’, उनले भने, ‘अब देश विकास र सुशासनको बाटोमा जान जरुरी छ। म यसका लागि सबैलाई आह्वान गर्छु। हिंसा र वितण्डा गर्छौ भन्‍ने हो भने सरकारले असोज १, काठमाडौं । कठोर राजतन्त्र र पञ्यायतको विरोध गर्दा त्यो बेलाको शासन सत्ताले विरोध गर्नेलाइ जेल हाल्थ्यो । त्यस्तै अब गणतन्त्रको पनि विरोध गर्नेलाइ सरकारले नियान्त्रणमा लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुल्ला कार्यक्रमबाटै चेतावनी दिएका छन् ।
नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
Posted byadmin September 18, 2019 Posted inखबरहबLeaveacomment on राजाले आफ्ना विरुद्ध बोल्नेलाई जेल हाले जस्तै गणतन्त्र विरुद्ध बोल्नेलाई पनि जेल हाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी
NAMASTE NEPAL, Proudly powered by WordPress.